Isevisi Yezimpahla Zoku-inthanethi Ezingu-24X7X365 Izinsuku
Abapakisha Bendawo nabahambisa iMumbai baye e-Bangalore
Abapakisha abahamba phambili nabahambisa iMumbai baye e-Chennai
I-Local Packers and Movers Mumbai to Hyderabad izinsuku ezingu-24x7x365 ezitholakalayo zokushintshwa kwasekhaya ngezinsizakalo zokuthutha ihhovisi
I-IBA Igunyaze Amapaki Asendaweni Ahamba Phambili & Movers Mumbai to Pune
Yiziphi Izinhlobo Ezihlukene Zezinsiza Zokuthutha Ngezimoto Ezitholakala ENdiya, Futhi Isho Izinzuzo Zazo
izinsiza zokuthutha impahla
Amaloli Okuthutha Amakhulu
Izinkampani ezihambayo zokupakisha ziyindlela engcono kakhulu yabantu abadinga ukushintsha imikhiqizo yendlu isuka endaweni eyodwa iye kwenye. Lezi zinkampani nazo...
Ingabe Amapaki Angochwepheshe NamaMovers Asiza Kanjani Ekuthuthweni Kwamahhovisi?
Izinkampani ezisiza abantu ngokupakisha izinsiza ezihambayo zizoba nezinkampani ezifundazweni nasemadolobheni ahlukahlukene njengeChennai, Bangalore, Kolkata, naseMumbai. Okunye...
Sonke siyakwazi ukubaluleka kwamapaki asekhaya athengekayo nezinsiza zokuthutha. Kuyindinganiso enhle ukuthi iningi labasebenzi basemadolobheni angaphandle badinga ukushintsha izinto zabo...
Kuleli khulunyaka lama-21, abaningi bethu baqashwe ezinkampanini ezizimele ezihlukene. Imisebenzi enjalo idinga ukuguqulwa ukusuka kwelinye idolobha kuye kwelinye ukuze kube seduze...
Izinsiza zokuthutha izimoto zibalulekile ekuthutheni izimpahla nezimpahla zisuka endaweni eyodwa ziye kwenye ezweni lonke. Amasevisi ezimoto eziqashisayo adlala indima enkulu...
123...73Ikhasinkomba 1 of 73
izinsiza zokuthutha impahla293
izinsiza zokuthutha izimpahla eduze kwami216
imboni yezokuthutha nempahla72
i-ejensi yokuthutha impahla55
Izinhlobo zezimoto zezentengiselwano37
izindaba zokuhamba kwabezindaba33
Yiziphi amabhizinisi nezimboni ezinomthelela okhethekile emnothweni womhlaba?
Ibhizinisi elibonakala ikakhulukazi endaweni ezungezile, amaphephandaba, imakethe evamile yilokhu okulandelayo:-
Izinkampani ezihluza uwoyela
Izimboni ze-Cotton Textile
Izimboni Zokutshala Ushukela
Izimboni Zokucubungula Ukudla
Izimboni Zikagesi Nezikagesi
Auto components Izinkampani
Izindiza kanye nezimboni zezindiza
I-Courier ne-Parcel Industries
Amathangi okugcina Izimboni
Izinkampani zikashokoledi wamabhisikidi
Packers Movers Izinkampani
Ngokwesilinganiso, zingaki izinhlobo zamaloli ezimoto ezithengiswayo ezikhona emhlabeni?
Iningi lamaloli ezimoto ezihwebayo abonakala emhlabeni ami kanje
Iloli elincane (Tempo MCV)
I-ICV Truck Intermediate commercial car
Amaloli e-LPT (Amaloli e-Long Platform)
Iloli le-HMV (Imoto Enzima)
Vula Iloli Le-Platform
Iloli lemfucuza eyingozi
Izixube zikakhonkolo I-Bulker Truck
Iloli Lokuthwala Izimoto
I-India yizwe lika-Devbhoomi kanye nenkosi ekhazimulayo u-Bharat. Ngenxa yokulula, kulula, okuthuthukile kanye nempumelelo, kule minyaka eyi-1000 edlule, abahlaseli abaningi bakwamanye amazwe beze bakonakalisa ngenkohliso futhi baphula isiko futhi babeka ubuntu babo obudlabha kithi ngokutshela impucuko yethu efanelekile ukuthi ibe buthakathaka. Ngenxa yalokho, asazi isi-Hindi noma asiqondi isi-Urdu futhi asikwazi ukukhuluma isiNgisi.
Ithini ikhodi yeposi yaseNdiya?
Ikhodi yokuposa eyakhiwe iposi yaseNdiya hlola iphinikhodi yendawo yakho nekhodi yeposi:-https://www.indiapost.gov.in/VAS/Pages/findpincode.aspx
Mingaki imifula eNdiya?
Zingaki izifunda eNdiya?
Izigodi ezingama-718 e-India.
Isiphi isimo esikhulu kunazo zonke eNdiya?
I-Rajasthan (342,239 km²) iyisifunda esikhulu kunazo zonke eNdiya ngokwendawo .
Iyini i-pan India?
I-PAN India ? ngokuyisisekelo isho Ubukhona Ezweni Lonkana. Kuyitemu elihlanganisa cishe yonke into esabalele noma ehlobene neNdiya. Isibonelo, kungaba mayelana nezinkampani, amabhizinisi, nanoma yini yesizwe.
Mangaki amaloli eninawo esewonke?
Sine Amaloli ayi-5000 ixhunywe kusuka Izifunda ezingama-638 lapho silayisha khona noma sibuyisela umthwalo osuka emadolobheni, emaphandleni, emadolobheni amakhulu nasezindaweni ezikude ezinzima kakhulu. Ngokuhambisana nalokhu, sibanikeza amathayi, amabhethri, izingxenye eziyisipele kanye nezinqubomgomo zomshuwalense ngamanani abathengisi.Futhi u-40% wenzuzo yale nqubo yonke wenza umnikelo omncane emindenini yabashayeli bamaloli ngengozi ukuze uthole izinsiza zezimali noma zezempilo. Ukuze impilo yakhe yokufa ingapheli ngaphambi kokuzihlonipha.
Mangaki amaloli eNdiya?
Ngemithombo, ulwazi selutholakele lokuthi ngokwesilinganiso amaloli okuhweba angama-80 lakh aqashwe eNdiya. Kuzo u-20% kuphela osebenzayo nsuku zonke.
Okusele U-30% wamaloli linda isikhathi eside ukuze inombolo yabo ivele ezinkampanini ezilayishayo noma ezithululayo.
On 15% emigwaqweni, amaloli ashaywe yiziphathimandla ame emigwaqweni emikhulu ezoqola inkohlakalo.
U-10% wamaloli zipakwe ngenxa yebhuleki noma ukungabi nomshayeli.
Futhi abasele U-25% wamaloli balinde umthwalo obuyayo emadolobheni amancane, izifunda noma izindawo ezikude ezingafinyeleleki zaseNdiya.
isimo se- abashayeli bamaloli kubi kakhulu ngenxa yokungatholi izimpahla ezinhle.
Izinto zokuhamba ezihamba phambili ayidingi okokufaka kwamandla. Isibonelo se ezokuthutha ezingenzi lutho ukusabalalisa, ukunyakaza kwama-molecule ukusuka endaweni yokugxila okuphezulu ukuya endaweni yokugxila kancane. Amaprotheni enkampani yenethiwekhi namaprotheni eziteshi abandakanyeka ekusabalaliseni okwenziwa lula.
Kungani Ezokuthutha kanye Nezokuthutha kubiza Okuhlukile kuzo zonke Izinkampani?
Kunezizathu eziningi ezingathi sína zalokhu, ngenxa yalokho imiphumela engemihle elandelayo ivame ukubonakala njengomphumela wengqondo ewumngcingo.
Uhulumeni ubengakayilungisi imali yokugibela amakhilomitha embonini yamaloli.
Inyunyana yezokuthutha ibuthaka
Akubanga khona ukuthuthukiswa okulindelekile kwezimboni noma i-mandis yonke indawo.
Ngenxa ye-capitalism, ukubusa kwabantu abambalwa kakhulu kuye kwakhiwe kuleli bhizinisi, elilawulwa ngokuzenzakalelayo.
Lamasadhu, obaba, abaholi bezepolitiki kanye nabakwamanye amazwe basebenzisa imali yabantu abamnyama ukukhuthaza ubunxiwankulu nokubamba amabhizinisi. Futhi usebenzise izindlela ezinodlame ukuze uthole inzuzo. Lezi zindaba zibonakala emaphephandabeni ezindaba.
Ngenxa yokuntuleka kobumbano, kwanda ukulawulwa kwabashayeli nempilo yabashayeli yaba muncu. Ngisho nangemva kokusebenza amahora angu-18 kuya kwangu-20, ikilasi labashayeli alikwazi ukuhlangabezana nezidingo zabo.
Izintengo zezimoto nezinsiza ziyabiza nsuku zonke, kodwa imali yokugibela ayikhuphukanga kusukela eminyakeni eyishumi edlule futhi izindleko zikhuphuke ngaphezu kuka-80%.
U-Transporter ukhokha intela engu-18% kuya ku-28% kuzo zonke izindleko kodwa akayitholi inzuzo yembuyiselo yetekisi.
Kunenkinga yokubuyisela umthwalo ngaso sonke isikhathi. Umthwalo obuyayo ovela edolobheni le-Tier 2 Tier 3 kufanele ulinde izinsuku ezi-5 kuye kweziyi-10. Umthwalo awutholakali kwezinye izindawo.
Ngenxa yemvelo engaphephile, ukuwohloka komnotho, inkohlakalo kanye nokungaziphathi kahle kwabantu ngaso sonke isikhathi, umshayeli ubanjwe wudakwa, ngenxa yalokho izingozi ziyanda.
Ukuphepha kwenkokhelo yempahla kanye nokubanjwa okugcwele ngobuqili
Uhulumeni kanye nezinqubomgomo zikahulumeni ziyehluleka ukwenza ibhizinisi lethu.
Konke lokhu okungenhla kuzothinta izindleko zakho zokuhamba nezokuthutha.
Qaphela :- Iminyaka eyishumi edlule izindleko zokuhamba bezingu-5% womkhiqizo wakho. Njengamanje inyukile isuka ku-8 yaya ku-30%
Uyini umehluko phakathi kwe-Transport v/s Logistics?
Ezokuthutha iyona UKUHAMBA NGQO KWEZIMPAHLA futhi Logistics iyona UKUPHATHWA KWEZINDLELA ZOKUTHUTHWA NGAPHAKATHI NANGAPHANDLE KWEZIMPAHLA ukusuka kumkhiqizi kuye ekugcineni kuye kumsebenzisi wokugcina….
Ungaliqala kanjani ibhizinisi lezokuthutha eNdiya?
U-99% wabathuthi e-India bacindezelwe ngokwendawo nangokomnotho. Uma nawe ufuna ukwenza ibhizinisi elifanayo, lizoqala ngama-lakh rupees angama-20 kuye kwangama-50 okuzoba ivalwe ngokulahlekelwa eminyakeni emi-5. Kepha ngebhizinisi elingaphambili nelikahle, wena badinga imali engaphezu kuka-10 crore, abasebenzi abanamakhono, ubuchwepheshe obuphambili, isipiliyoni seminyaka engu-2 esinolwazi oluphelele lwendawo lubalulekile.
Iyiphi indlela yokuthutha eshibhe kakhulu e-India?
Amanzi, umhlaba kanye nomoya, ngokwesilinganiso, zonke lezi zindlela zokuthutha zitholakala kuwo wonke amazwe ukuze zihambe, kodwa ngokukhumbula indawo okuyiwa kuyo, kunqunywa ngokwesimo. Sihlinzeka ngezinhlobo ezingama-32 zezinsizakalo zokuhamba emgwaqeni eNdiya kanye nasezifundazweni Zamazwe ase-Asia ezingase zishibhile futhi zibe nenzuzo kuwe .
Ungayithola kanjani ilayisense yokushayela eNdiya?
Uhulumeni wenze imizamo eminingi yokuthola kalula izincwadi zokushayela, kodwa kunzima kakhulu ukuthola ilayisense ngaphandle kwe-ejenti. Intengo yayo yokugcina nayo inqunywa yi-ejenti. Lapho ukuxega okudingekayo kwenziwa ngokwemali futhi ngenxa yalokho ubugebengu nezingozi zibonakala zanda ngokuqhubekayo. NgeNGO yethu entsha, kuwumzamo wethu ukunikeza ilayisense yamahhala kubantu abaswele ngokuqeqeshwa okuhle kwezinyanga eziyisi-6. Ukuze abasweleyo abangasebenzi bathole imisebenzi futhi umphakathi uthole abashayeli abahle nabathuthukile. Njengamanje sisesigabeni sokuxhasa lo msebenzi wonke.
Imuphi umbono oyiphutha omkhulu ebhizinisini lezokuthutha?
Ukunganaki i-geography nekhono ebhizinisini lezokuthutha, kunenkolelo yokuthi abanikazi bezimoto basebenza ngamanani aphansi ngisho nangemva kwesikweletu esikhulu sesikweletu, umthwalo wemfanelo kanye nezindleko.
Ithini inombolo yezokuthutha?
I-Road Transporter + 919408275245
Iyiphi inqubo engcono kakhulu yokuthumela?
Sibuza imibuzo engu-33 kumakhasimende ethu futhi sinikeza 2 noma 3 kuye ngemfuneko yawo, isilinganiso sesabelomali kanye nomthwalo. Iloli lithunyelwa ukuthi lilayishwe kuphela ngemva kokuthatha i-oda lomsebenzi kanye no-20% kusengaphambili ngokuvumelana nesipho esigunyaziwe. Ngemva kokulayisha qedela wonke amadokhumenti. Bese uthatha ibhalansi engu-80%. Futhi nsuku zonke yazisa ikhasimende mayelana nenqubekelaphambili yomsebenzi walo. Ngemuva kokulayisha endaweni, impendulo ithathwa kuzo zombili izinhlangothi ngokuthuthukiswa kwazo okuzayo.
Umnikelo wamanje kahulumeni ekuthuthukisweni kwebhizinisi laseNdiya?
Ongoti bezimboni ikakhulukazi bathi uHulumeni udinga ukubekezelela ukunyathela ekusebenziseni imali eningi emikhakheni ethile. Njengoba uHulumeni wamanje ugxile ezintweni ezehlukene njengezemfundo, ingqalasizinda, ezempilo, ukuxhumana nokunye. Konke lokhu kuyizici ezinkulu ezivuselela ukukhula ngokuncipha komnotho. Kunamakhulu osomabhizinisi kanjalo nabaqalayo emikhakheni yezokukhiqiza asebethuthukisiwe ngomnotho. Uhulumeni useqale izinyathelo ezithile zokuvuselela umnotho ngokukhula okuthuthukayo. I-India isabela esidingweni sokukhiqiza kanye neminye imikhakha yezinsizakalo bese kuthi ama-80% e-GDP athuthuke.
Ithini ingxenye yekhasimende? Isigaba samakhasimende aseNdiya sinjani?
Ukuhlukaniswa kwekhasimende akulutho kodwa kuwumkhuba wokuhlukanisa ikhasimende libe yiqembu. Bekulokhu kwenziwa ngezinto eziningi ezihambisana nokumaketha. Ngakho-ke, idlala indima ebalulekile ekuhlangabezeni izintshisekelo kanye nemikhuba yokuchitha imali. Ngakho-ke, kuthiwa ukuhlola izindlela ezithile zokuhlela nezidingo zokumaketha.
Izigidi zabantu baseNdiya zinebanga elikhulu kakhulu lesisekelo. Kubuye kubhekwe njengokuphakeme ngenxa yobubanzi bemakethe yaseNdiya. Kubandakanya isigaba esimaphakathi, esicebe kakhulu, kanye nesigaba sesisekelo esingaphansi kwesilinganiso. Inenani elichichimayo lengcebo futhi ngezinye izikhathi libandakanya esimweni esibi kakhulu. Ukuhlola isizindalwazi kuveza nesigaba esikhulu sesisekelo samaNdiya.
Yini ebangele ukuhlukahluka kwezindawo okwenza kube nzima ezinkampanini zamabhizinisi ezifundazwe eziningi eNdiya?
Ubuwena bobuhlanga, amasiko, uhlanga, ubulili nezinye izinhlobo zobunikazi bunquma ukuthi abantu bawazi kanjani, bawubone futhi bawuzwe kanjani umhlaba. Abantu abavela ezindaweni ezehlukene bacabanga, basabele futhi bafunde ngendlela ehlukile. Kunzima ezinkampanini zamabhizinisi ezifundazwe eziningi eNdiya ngenkathi zizama ukuqonda abasebenzi bazo. Okubaluleke kakhulu, ukuhlukahluka kwezindawo kuzoholela ekuntulekeni kobumbano phakathi kwenhlangano. Uma kusetshenziswa kahle, ukuhlukahluka kwezindawo kungahlinzeka ngokubuka okuphelele nokunezinhlangothi eziningi ekuhlakanipheni nasekuhlakanipheni ezinkampanini zamabhizinisi ezifundazweni eziningi. Izinkampani zase-India azinazo izinkinga ezengeziwe ngohwebo lwezifundazwe eziningi olukhokhelwayo lwe-Geographical diversity. Kungenxa yokuthi inqubo ilula kancane.
Ingabe ikhona imoto yokuthengisa esebenza kahle etholakala eNdiya njengoba kulindelekile?
Uguquko eNdiya luba ngokoqobo ngokwengeziwe njengoba uhulumeni wamanje uqhubekisele phambili futhi wacindezela kakhulu ukuhamba kukagesi. Ithangi lokucabanga likahulumeni - i-NITI Aayog ibihola izinguquko zokwandisa indlela yezokuthutha ekhipha i-zero. Amaloli e-Multi-Axle (MATs) athathwa njengemoto yokuhweba yezimpahla esebenza kahle etholakala eNdiya futhi esetshenziswa kakhulu kwezokuthutha zezimboni. Lezi zimoto zihluka kakhulu ukusuka ku-26.2 ton kuya ku-49-tons wesisindo esiphelele. Ukudayiswa kwalezi zimoto kwenyuke ngo-2009% phakathi kuka-2010 no-55. Izimoto ezihweba ngezimpahla sezithuthukiswe kakhulu ezingeni eliphezulu kakhulu u-60% ezimakethe zezimoto ezihwebayo athuthukiswe kakhulu.
Uyini umehluko wezindleko zempahla noma zokuhamba eNdiya?
Umkhakha wezokuthutha waseNdiya mkhulu kakhulu futhi uhlukahlukene. Ibilokhu yenza isixazululo esikhulu sokuhamba ngomgwaqo. Ezimpahleni ezishintshayo kanye nemikhiqizo, ukuthutha emgwaqeni kuyadingeka kakhulu futhi kuhilela izenzo ezinhle. Inemiphumela eminingi futhi iningi lempahla ethengwayo evela kwamanye amazwe incike kwezokuthutha emgwaqweni. Futhi, izindleko zokuhamba eNdiya ziyathengeka futhi zincike kusayizi webhizinisi. Isebenza kusukela ekushicilelweni okwenza isilinganiso sabantu sibe yisikhathi sezidingo zokuthutha. Ngakho-ke, ithole ngokususelwa ezinhlobonhlobo zezinto zokuhamba kanye nezindleko zokuhamba zikhawulelwe emikhakheni yebhizinisi.
Kuyini ukuthutha okunzima kwe-ODC okuwumsebenzi olula eNdiya?
I-ODC, ngenye indlela ebizwa ngokuthi i-over-dimensional cargo yengezwa ngaphandle kwedekhi yezimoto ukuze kuthuthwe izimpahla ezinosayizi omkhulu. Kokubili ubude nokuphakama kwempahla kukhulu kunezimoto ezijwayelekile. Lezi zimpahla ezisindayo zisetshenziswa emikhakheni yomibili yasekhaya neyezohwebo. Ezokuthutha ze-ODC e-India zingasiza abantu ukuthi basuse izimpahla zabo ezisindayo ukusuka endaweni eyodwa ukuya kwelandelayo ngokushesha. Kungenxa yokuthi lezi zimoto zihlome kahle ngemishini eminingi yesimanje. Bayakwazi ukuthutha izimpahla ezisindayo ngokuhamba amabanga amade. Umhlinzeki wesevisi yezokuthutha unolwazi olwanele kulo mkhakha, ngakho ithimba lenza yonke inqubo yezokuthutha ingabi nazinkathazo.
Bangaki abakhiqizi bezimoto ezinhle ze-Goods Carrier abadumile emhlabeni?
Baningi abakhiqizi bendawo noma besifunda noma amayunithi ahlanganisayo enza izimoto zentengiso ngaphansi kwamagama amaningi. Kodwa sizokwabelana nawe ngohlu lwabakhiqizi bamaloli abadumile kakhulu, abaphumelelayo nabasezingeni eliphezulu.
I-Daimler AG (Mercedes-Benz)
Zingaki izifundazwe eNdiya?
I-India inakho I-29 ithi. Kukhona futhi 7 izindawo zezinyunyana .Kodwa ngokombono wokulula kanye nempumelelo, sizibheka ngokwesifunda esilandelayo.
South India :- I-Andhra Pradesh ,Karnataka , Kerala ,Tamil Nadu ,Telangana , I-Pondicherry (noma i-Puducherry),
I-Western India :- Maharashtra , Goa ,I-Gujarat , Ubaba no-Nagar Haveli , UDaman & Diu ,Rajasthan
I-East India (INyakatho-mpumalanga yeNdiya):- Arunachal Pradesh , Assam , I-Meghalaya , I-Manipur , I-Mizoram , Sikkim , Tripura , Nagaland
ENyakatho India :- Bihar , I-Chhattisgarh , I-Haryana , Chandigarh , Himachal Pradesh , I-Jharkhand , Madhya Pradesh
Odisha , Isi-Punjab , Uttar Pradesh , Uttarakhand , West Bengal, Delhi , Jammu & Kashmir , I-Ladakh.
Island :- U-Andaman noNicobar , Lakshadweep
Zingaki izilimi e-India?
E-India, sinezilimi ezingaphezu kuka-1600+ okuwulimi lwebele lwabantu. Ezifundeni ezehlukene zezwe lakithi ulimi oluhlukene lukhulunywa abantu bakuleyo ndawo.
Mangaki amabhuloho eNdiya?
200+ ibhuloho elikhulu eNdiya kodwa ngenxa yezinga lenkohlakalo alikho esimweni esihle kangako.
Mingaki idolobhana eNdiya?
amadolobhana angu-6,64,369 XNUMX XNUMX eNdiya .
Zingaki izifunda kanye nezindawo zezinyunyana eNdiya?
I-India inakho I-29 ithi. Kukhona futhi 7 izindawo zezinyunyana.
Iyini i-GDP yaseNdiya?
I-GDP ngamanani amanje ngo-2020-21 alinganiselwa ku-Rs 197.46 lakh crore uma kuqhathaniswa nezilinganiso zokuqala ezibuyekeziwe zama-Rs 203.51 lakh crore ngo-2019-20, okukhombisa ukwehla -3.0% ngamaphesenti uma kuqhathaniswa nokukhula okungamaphesenti angama-7.8 ngonyaka wezi-2019-20, kusho umnyango.
Singakanani isikhathi eNdiya?
I-UTC/GMT +5:30 amahora
Iliphi iloli elihamba phambili?
Baningi abakhiqizi bamaloli eNdiya, abamukela ukusungulwa okusha nsuku zonke. Kodwa nokho ngokocwaningo lwemigwaqo emikhulu
Amaloli e-TATA: - Angcono kakhulu ukuphinda adayiswe, Ukunakekela, nokonga uphethiloli
I-Ashok Leyland :- Ihamba phambili ku-Hill Side Movement.
Eicher:- Super Fuel Efficiency, Excellent Breaking System, Comfortable and Smooth Driving.
Amaloli e-Mahindra: - Adumile engxenyeni yezimayini
I-Bharat Benz :- I-Heavy Haulage Oversize Load
ISUZU :- Ingxenye ye-LCV Ingcono Kakhulu Endodeni Encane Evamile Yebhizinisi Lendawo .
Zonke Izinhlobo Zamaloli Nomlando Wamaloli:- Sicela uchofoze
Yiziphi izindlela ezahlukene zokuthutha ?
Ngolwazi Lwami izindlela nezindlela zokuthutha ezahlukene ezokuthutha emoyeni, emanzini nasemhlabeni, okufaka ojantshi noma ujantshi, izindlela ezizayo izindlela zezintambo kanye nezinhlelo ze-drones
Kuyini ezokuthutha nokuxhumana?
Ezokuthutha zineqhaza elibalulekile emsebenzini wezomnotho. Ngaphandle kokufinyelela ngokomzimba ezinsizeni nasezimakethe, ukukhula nokuthuthukiswa komnotho kwakungeke kwenzeke. Ngakho-ke, uhlelo lwezokuthutha olusebenzayo luyisici esibalulekile ekwenzeni intuthuko yomnotho esimeme.
Iyini izindleko ezimaphakathi zezinto zokuhamba nezokuthutha ?
Ukuthuthwa Kwempahla Okujwayelekile Ama-Rupee angu-15 Ithani Ngekhilomitha
Oversize Umthwalo Wempahla Ezokuthutha Ama-Rupee angu-25 Ngethani Ngekhilomitha + Zonke Izindleko Zezimvume
Imigomo Nemibandela iyasebenza
Ubani owethule ezokuthutha zokususa ikhabhoni eNdiya?
IForamu Yezokuthutha Yamazwe Ngamazwe (i-ITF) kanye Nesikhungo Sikazwelonke Sokuguqula I-India (i-NITI Aayog), bethule ngokuhlanganyela iphrojekthi Yezokuthutha Ezisusa Ikhabhoni Kwezomnotho Esafufusa (i-DTEE) e-India.
Indlela yokuthutha izilwane ezifuywayo eNdiya?
Isilwane esifuywayo isilwane esifuywayo. Ezweni elisathuthuka njengeNdiya, lapho inkonzo yokuthutha umphakathi nempahla ingeyinhle, kunzima ukuthola umthuthi wezilwane ezifuywayo. Sikusiza ukuthi uthole umthengisi ongcono kakhulu onombono osebenza kahle .
Ungayithola kanjani ilayisense yokuthutha eNdiya?
Ukubhaliswa kwe-Small Transport Startups Enterprise kusuka kuphothali ye-MSME kanye nenombolo Yokubhalisa evela kuphothali ye-GST kutholakala mahhala kumthuthi omusha phakathi nesonto. Uma ungakwazi, ke the GRAHAK SUVIDHA KENDRA izokubiza ama-Rs.500. Ngokwesilinganiso, umsebenzi wakho uzokwenziwa kuze kube yibhizinisi lama-lakhs angama-20. Ngemva kwalezi zindleko zephepha zizokhula ngeholo lakho kanye nebhizinisi. Uma kunesidingo, ukubhaliswa kwendawo noma kwesifunda kufanele kwenziwe.
Yini ezokuthutha ?
Inqubo eyenzeka ekudlulisweni kwabantu noma izimpahla ibizwa ngezokuthutha.Inhloso yokuthuthela kwenye indawo noma ezokuthutha ngokwesilinganiso iyinzuzo ngezindlela eziningi.Ikakhulukazi izinsiza zayo ezintathu ezidumile ezokuthutha ngamanzi, ezokuthutha ngendiza, ezokuthutha emgwaqeni.Okwamanje, izindlela ezintsha ezinjengojantshi, imizila yezintambo, ama-drones nawo ayasebenza futhi ayathuthukiswa.
Zingaki izinhlobo zezokuthutha?
Ikakhulukazi izindlela zayo ezintathu zokusebenza ezidumile ziyi ezokuthutha ngamanzi, ezokuthutha ngendiza, ezokuthutha emgwaqeni.Okwamanje, ama-mediums amasha afana nojantshi, amaropeways, ama-drones nazo ziyasebenza futhi ziyathuthukiswa.sinekhono izinhlobo ezingama-32 zokuthutha umgwaqo osindayo.
Ubani ungqongqoshe wezokuthutha waseNdiya?
I-SHREE NITIN JAIRAM GADKARI
UNGQONGQOSHE WEZOKUTHUTHA EMIGWAQO IMIGWAQO KANYE NEYOKUTHUTHA
"Ezokuthutha Bhawan" 1, Sansad Marg, New Delhi - 110001
Ucingo:+91 11-23711252, 23710121
Iyini incazelo nokusetshenziswa kwenkampani noma imboni empeleni?
Inkampani noma imboni, empeleni, iyibhizinisi elibandakanya ikakhulukazi ibhizinisi. Inkampani ingahlelwa ngezindlela eziningi. Inkampani ingaba yinkampani, i-prietorship eyodwa noma ngaphansi kobambiswano. Ngokusekelwe enkampanini ehlukene osebenza nayo, ingaba ngeyomuntu oyedwa noma iqembu labantu. Inkampani ingahlelwa kahle ngaphansi kwezimo eziningi. Isikweletu wuhlobo olubalulekile lwenkampani olucatshangelwa ngokukhethekile. Inkampani noma imboni yaseNdiya inokukhula okukhulu ngokuthuthuka kobuchwepheshe besimanje nezindawo zokuhamba ezweni lonke.
Intshisekelo yomphakathi inamuphi umthelela embonini noma ezimbonini?
Ukwakhiwa kwezimboni kunomthelela omkhulu emphakathini futhi abantu kufanele babheke ngabomvu izinguquko ezithile ezweni. Ngokusekelwe ezintshisakalweni zomphakathi embonini, inzuzo kanye nokuqashwa kuya phezulu. Kwanda ekukhuleni kwedolobha futhi abantu bathuthela esikhungweni sasemadolobheni ekuthuthukisweni kokusesha. Ezokuthutha emgwaqeni, kukhona intuthuko esungulwe ekusizeni umphakathi. Intuthuko yezomnotho nayo ibambe iqhaza ekuguqukeni kwezimboni. Ilethe izinguquko ezibalulekile emphakathini phakathi kwezintshisekelo zomphakathi ekuthuthukisweni kwezimboni. Inguquko iveze ukuthi ibheke izinguquko ezibalulekile kwezokuthutha emgwaqeni ezinhlangothini zemboni. Abasebenzi bayakhokhelwa futhi bazuze ekukhiqizeni ngobuningi bezimpahla.
Kuyini Logistic futhi yini esebenzayo?
I-Logistics isetshenziswa kabanzi ukubhekisa kunqubo yokuhambisa izinsiza ezihlanganisa okokusebenza, imikhiqizo, izinto zokwakha, kanye ne-inventory isuka endaweni eyodwa iye kwelandelayo endaweni okuqondiswe kuyo. Leli gama lisetshenziswa ezinhlelweni eziningi. Kunezinhlobo ezahlukene zezinsizakalo zezokuthutha ezitholakalayo kodwa ezokuthutha zomgwaqo zithola udumo olwengeziwe phakathi kochwepheshe bebhizinisi. Kungenxa yokuthi uma imikhiqizo yebhizinisi noma impahla ingakwazi ukufinyelela amakhasimende, izohluleka. Yindawo efanele lapho ezokuthutha zomgwaqo zidlala indima ebalulekile. Kuphinde kube nomthelela kwezinye izici eziningi zamabhizinisi. Uma imikhiqizo ithunyelwa kumakhasimende akho ngesikhathi, izonyusa inzuzo yenkampani.
Zingaki izinhlobo zezinto zokuhamba ezisetshenziswa kakhulu eNdiya?
Ngokukhula ngokushesha kwamadolobha eNdiya, ukukhula koMnotho wezwe nakho kuye kwaba ngcono. Uhlelo lwezokuthutha luthuthukisiwe lwaba nezindlela ezihlukile ezifana nezokuthuthwa komgwaqo, izitimela, ezokuthutha zamanzi aphakathi nezwe, izikhumulo zezindiza, nezinkampani zezindiza, imikhumbi yasogwini nokunye okuningi. Imigwaqo iyindlela ehamba phambili yokuthutha ethwele cishe u-85% wesamba sezimoto ezikhiqizwa ezweni. I-India inezimoto ezibhalisiwe ezibalelwa ezigidini ezingu-191.7 kanti Izinga Lokukhula Lonyaka Elihlanganisiwe lisuka ezimotweni ezibhalisiwe eziphelele e-India lenziwe laba ngcono lafinyelela ku-94%. Ngokukhula kwesibalo sezimoto emigwaqeni, kuphinde kuvule indlela yokuthuthukiswa kwebhizinisi.
Yibuphi ububi bebhizinisi lezokuthutha?
Nakhu ukonakala kwebhizinisi lezokuthutha njengokulandelayo:
Izingozi Ezivamile Ukuthuthwa komgwaqo eNdiya kuyingozi. Izinyathelo zokuphepha ezidingekayo azikaze zenziwe ezingozini zomgwaqo.
Umgwaqo Onganele Imigwaqo eminingi eNdiya ayanele futhi itholakala futhi isesimweni esibi. Kukhona imigwaqo engu-34 km ubude endaweni ngayinye engu-100 sq.km.
Izintela Ezinzima Kungenye into embi yebhizinisi lezokuthutha emgwaqeni. Umthwalo wentela ngemoto ngayinye kuleli yi-Rs. 3500.
Ukungalungiswa kahle kwemigwaqo Imigwaqo yaseNdiya ayinakekelwa kahle. Kukhona kuphela u-0.1% weholo likazwelonke elitshalwe ekulungisweni komgwaqo e-India.
Ukunyuka kwezindleko zikadizili nophethiloli Inani lokusebenza kwezithuthi zomgwaqo lilokhu likhuphuka njalo.
Ayizifanele izimpahla ezinkuluAyizilungele izimpahla ezisindayo
Yiziphi izinkinga zebhizinisi ezinkulu eNdiya?
Kusukela kudala amaNdiya abegqugquzela ukuthula. Ibhizinisi selithuthuke kakhulu laze lafinyelela ezingeni eliphakeme kodwa kunezinkinga eziningi amabhizinisi abhekana nazo. Kungakhathaliseki ukuthi kuhlobene nohulumeni, ubugebengu 'bonkulunkulu', izimo zemigwaqo, inkohlakalo, nanoma yiziphi ezinye, ibhizinisi liyathinteka ezimeni ezithile. Inkohlakalo iyisifo esibi kakhulu esisabalele eNdiya ngakho kubalulekile ukuthi isingathwe ngobuhlakani nangokushesha. Nakuba izwe lethu lidinga izinguquko ezimbalwa okwamanje ngezansi ezinye zezinto ezibalulekile okudingeka sizicabangele ukuze sibhekane nazo ngokushesha.
- Uhlelo lwezemfundo
– Inhlanzeko Eyisisekelo
– Uhlelo lwezempilo
– Ukuphepha kwabesifazane
Yini futhi bangaki abawela emthelela omubi webhizinisi wesevisi yezokuthutha embi?
Ngenxa yezinsiza zokuthutha ezimbi, amabhizinisi amaningi athinteka kakhulu. Ukushintsha izimpahla ziyiswe endaweni kuthintekile ngenxa yokungahambi kahle emgwaqeni. Kubandakanya inani elikhulu lezinto okufanele uzikhumbule futhi ukukhiqizwa kuzoba ngezansi. Ukuze ulawule lesi simo, izinto zokuhamba ezimbi zidinga ukunqoba ngokushesha okukhulu. Yandisa imigwaqo eyanele ezindaweni zasemakhaya ijwayele ukwandisa umkhiqizo. Okokufaka kwezolimo nezimakethe, ukuthuthwa komgwaqo kuyadingeka. Ngakho-ke, ukuhamba okubi kufanele kuxazululwe ngokuthatha izilinganiso ezifanele. Ikakhulukazi ezindaweni zasemaphandleni, ezokuthutha zibalulekile ukuze kwenziwe izinto eziningi ngokushelela. Ngakho-ke, uhulumeni kufanele athathe izinyathelo ezifanele ukugwema lo mbono oyiphutha futhi enze konke okusemandleni ukukhuthaza ezokuthutha emgwaqeni.
Inqubomgomo kahulumeni waseNdiya ifaneleka kakhulu ukwenza ibhizinisi?
Muva nje, uhulumeni waseNdiya oholwa nguNarendra Modi ugxile kakhulu emhlabeni obanzi wenani elingapheli labaqalayo abasafufusa. Ukuze kuzuzwe lokhu, uhulumeni waseNdiya udala amathuba amasha nezinhlelo. Basiza izinkampani kukho kokubili ukondla kanye nokusungula izinto ezintsha. Ziningi izinhlelo ezithathwe uhulumeni waseNdiya ukweseka amabhizinisi amasha. Iphinde ihlose ukugqugquzela impucuko yokusungula phakathi kwentsha yaseNdiya. Ngenzuzo engavamile nenkulu yezibalo, i-India ingakhuphula futhi ithuthukise ibhizinisi ngalinye futhi yenze imisebenzi ukuze kuzuze lesi sizwe kanye nomhlaba wonke. Zonke izinyathelo zithathwa ukuze izwe liphumelele futhi likhule.
UMnyango Wezokuthutha Emgwaqeni
Umgwaqo Omkhulu Kazwelonke
Ukuhlola Imininingwane Yemoto
I-Project Consultant Heavy Hauling
Ukwesekwa Kokuphathwa Kwempahla Nokugcinwa Kwempahla
Ukusekelwa Kwekhasimende: - +919408275245
I-India Time Zone :- 8AM ukuya ku-8PM
Ukungafihli kwebhizinisi, ukusebenzisana nokuxhumana okunobungane, ukusebenza kahle ngokwedlulele, isiqondiso esifanele nesiphetho esiphezulu kuyincazelo ye-ABCC INDIA Project Cargo Corporation. I-India, Nepal, Bhutan, Bangladesh 686 izifunda 6,49,481 ibeka njalo, elula, efinyelelekayo, ethengekayo, Ethembekile, evelele, ephathwa kahle ngezinsizakalo Zomnotho, indawo yethu yobungcweti nenesithunzi kuwo wonke amazwe. Siyenza yonke imizamo yokukhulisa izinto obala kanye nobulula bebhizinisi ngokuhlinzeka ngezinsizakalo eziqhubekayo, ezingachemi, ezilula, ezilula nezithembekile kuwo wonke umuntu kuzo zonke izindawo maqondana nezintshisakalo zosomabhizinisi. Ngeziphetho ezinhle kakhulu ngokuxhumanisa isifundazwe ngasinye nombandela ongcono kakhulu kanye nesisekelo semigomo, umbono webhizinisi lesizwe kanye nesithunzi kwaqhubeka endleleni yenqubekelaphambili. Esingeke sathola ngakho igama lesizwe elisathuthuka kodwa izwe elisathuthuka. Iminikelo nokwethenjwa kwamakhasimende kubaluleke kakhulu kunekhono lezinkampani lokukhiqiza imiphumela emihle, ukwethenjwa kwamakhasimende nokwaneliseka kuyimpumelelo enkulu yenhlangano yethu.
Inkinobho Yokushaya Manje